Abaarta ka jirta DDS Itoobiya oo laga jawaabay | KEYDMEDIA ENGLISH
Jawaabtii ugu horreysay ayey heshay, abaarta ba'an ee ka jirta dhulka dowlad deggaanka Soomaalida Itoobiya.
JIGJIGA, Soomaali Galbeed- Billawgii sanadkii tagay ilaa dabayaaqadii 2020, waxaa kordheysay xaaladda bani'aadminimo ee ka taagan deggaanada dowlad deggaanka Soomaalida Itoobiya.
Cabashada isi soo tareysa, waxaa markii ugu horreysay ka jawaabtay xukuumadda Adis Ababa, taas oo ku deeqday boqol bir oo lacagta Itoobiya ah, si wax loogu qabto dadka ay abaartu saameysay.
Guddiga xukuumadda Itoobiya ay lacagta u soo dhiibtay, waxaa ka gudoomay madaxweyne Mustafe Cagjar, kaas oo sheegay in ay billaw u tahay, kaalmo ay Itoobiya u qorsheysay, dadka ay abaartu waxyeeleysay.
Cagjar ayaa sidoo kale tilmaamay, in ay abaartu si weyn u saameysay deggaanada Soomaalida Itoobiya, wuxuuna xusay in dhibaatada jirta, looga samata bixi karo isku duubni iyo wadajir.
Madaxda dowlad deggaanka, ayaa xukuumadda Adis, ka dalbaday in ay soo de-dejiyaan kaalmada kale ee ay ugu tala galeen, dadka ay abaartu waxyeeleysay, waxeyna cabsi ka muujiyeen in abaartu ay waxyeeleyso deggaano hor leh.
Abaarta xoogga leh ee ka jirta dhulka Soomaalida Itoobiya, ayaa galaafatay xoolo fara badan, waxaana xoolaha dhintay u badan ari iyo lo', halka sidoo kale ay abaartu cagta marisay beerihii ay tacban jireen Soomaalida deggaanadaas ku nool, oo isugu jira beeraleey iyo xoolo dhaqato.